ကလိုစေးထူး: အရပ်ထဲက အသုံးတွေ…
အရပ်ထဲက အသုံးတွေမကြားဖူးတာတွေ မှတ်သွားပြီး ကြားဖူးပြီးသားတွေကို ဖတ်ပြီးရယ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ အမှန်တွေကြီးပဲလေး ကြားပါများတဲ့ စကားတွေကောတ့ ရှင်တို့ ကရဲတွေပဲဆိုတာ တော်၂များ၂ကြားရတယ်။ ဒါနဲ့အေးဓားမြ ဆိုတဲ့စကားတွေလည်း ပြောကြတယ်နော့် အစ်ကို။
Mar 20, 2008, 1:26:00 AM
ဒါပေမယ့် ဦးနေ၀င်းရဲ့ အဲဒီမိန့်ခွန်းကို အခြေခံပြီးတော့ `မကြောက်ပါနဲ့၊ မိုးပေါ် ထောင်ပစ်တာပါ´ ဆိုတဲ့ အရပ်စကား အသုံးတခုကတော့ တွင်ကျယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
There is an old Burmese movie in which "မိုးပေါ် ထောင်ပစ်တာပါ" line was said. I am not sure what the name of the movie is. Bo Aung Din? That movie is long before the speech by U Nay Win.
Anybody, who knows?
Mar 20, 2008, 3:04:00 AM
`လုပ်ကြပါ၊ ရှင်တို့က ရဲတွေကိုး´I cannot hear before.
but it's nice post.I love it.
Mar 20, 2008, 4:28:00 AM
ဗိုလ်ကြီးတို့လာမှ ကျွန်မတို့ရွာလည်း ပြာကျတာပဲ ဆိုတာကျန်သေးတယ်အစ်ကို :)
ဒီ post ကိုဖတ်ပီး သဘောကျတယ်။
Mar 20, 2008, 5:36:00 PM
ဟုတ်တယ် အဲဒီ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တာပါ ဆိုတာကတော့ ဗိုလ်အောင်ဒင် ရုပ်ရှင်ကလို့ ထင်တာပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ တကယ်ကို မှတ်သားစရာပါပဲ။ လူတွေ အရပ်ထဲ ရယ်ပွဲဖွဲ့ပြီး သုံးကြတဲ့ စကားတချို့ရဲ့ ရင်းမြစ်ကို လိုက်ကြည့်ရင် မရယ်နိုင်စရာပါ။
Mar 22, 2008, 8:45:00 AM
Your article is very good. I read it in Mizzima news and I madeacomment in there. I can type Burmese everywhere but I can't type it here I don't know why. Anyway, thank you very much for your creative art on fact.
Mar 23, 2008, 11:31:00 PM